Iindaba -Iqonga elinzima lomsebenzi wokuphakamisa
Ukuphakanyiswa kweQonga eliLukhuni, thelekisa nokuphakamisa iikholamu eziSelfowuni, kunokuvumela ukuhamba ngokukhawuleza nokucima. Uninzi lwemisebenzi kwisithuthi sentengiso luvavanyo kunye nolondolozo olulula, ekufuneka ligqitywe ngokukhawuleza. Ngokuphakanyiswa kweQonga, umqhubi unokujongana nale misebenzi ngokufanelekileyo, enokugcina amaxesha akho amaninzi. Ukuphakanyiswa kweqonga kusebenza kwindibano, ukulungiswa, ukulungiswa, ukutshintsha kweoyile kunye nokuhlamba izithuthi ezahlukeneyo zorhwebo (ibhasi yedolophu, isithuthi sabakhweli kunye neloli ephakathi okanye enzima).
Njengoko umatshini kuphela hydraulic iilifti umenzi kwezithuthi e-China, kunye ehamba phambili yorhwebo iilifti umenzi ehlabathini lonke, uyilo MAXIMA kwaye wenze iqonga ilifti yokuqala ngo-2016.
Ukuphakanyiswa kweqonga le-MAXIMA kwamkela inkqubo yokuphakamisa ngokuthe nkqo ngesanti kubunzulu baphantsi kunye nesixhobo sokulawula ulungelelwaniso oluphezulu ukuqinisekisa ungqamaniso olugqibeleleyo lweesilinda ze-hydraulic kunye nokuphakamisa ngokugudileyo phezulu nokuhla.
Emva kweminyaka yophuhliso, iinjineli zethu zobungcali zihlala zihlaziya uyilo lweelifti zeqonga kunye nezinto ezinxulumene noko. Kuluvuyo ukwazisa ukuba, i-MAXIMA inokwenza zombini kunye nokunyuka komhlaba kwiqonga ngoku. Ubude beelifti zeqonga zinokuba ziimitha ezisi-7, i-8 yeemitha, i-9 yeemitha, iimitha ezili-10, kunye neemitha ezili-11.5. Kwakhona ii-MAXIMA zixhobise iqonga lokunyusa umqadi onzima womsebenzi, onokuthi uphakamise umthamo ube ziitoni eziyi-12.5.
Kwi-2018, iilifti ze-MAXIMA zonyuselwa ukuba ziqinisekiswe yinkampani yesatifikethi yakwa-Israeli. Ukusukela ngoko, amashumi eeseti zokunyusa iqonga le-MAXIMA anikezelwa kumkhosi wakwa-Israyeli. Kwakuloo nyaka, iilifti zeqonga le-MAXIMA zanikwa imbeko yokufumana isatifikethi se-CE.
Cinga ukunyusa isithuthi, cinga MAXIMA. Ngemveliso esemgangathweni, kunye nenkonzo yobungcali yasemva kwexesha evela kwi-MAXIMA kunye nomhambisi wethu wasekhaya, i-MAXIMA iya kwenza imisebenzi yakho ibe lula. Nanini na xa ufuna inkxaso, i-MAXIMA iya kuhlala ikho. Ukuvumela ukuba sikunike iingcebiso zobungcali kunye nezisombululo ezifanelekileyo kulo mbuzo, ngoku fowunela u-0086 535 6105064.